Sakaja, Sonko iyo Waweru oo ay wada shaqeyn dhex mari doonto – The Voice of Northeastern Kenya
Sakaja, Sonko iyo Waweru oo ay wada shaqeyn dhex mari doonto
Senetarka countiga Nairobi Mike Sonko, iyo xildhibaanka sida magacaabista ah ku soo galay aqalka barlamaanka Johnson Sakaja iyo xildhibaanka deegan barlamaanedka koofur Dagoretti Dennis Waweru ayaa waxa ay ku wada heshiiyen in ay wado shaqeynn meesha looga saarayo gavanaha countiga Nairobi in ay wada dhex marto.
3 hoggaamiye ayaa maalinta shalay ahayd isku afgartay arrintaas xili ay kulan ku wada qaaten hotelka Serena.
3 hoggaamiye ayaa ka qeyb galin kulan galinki hore ee shalay ka dhacay magaaladatan Nairobi kaas oo ay isugu yeeren xildhibaanada Nairobi si loogu wada mideeyo dhamaan musharaxiinta u hanqal taagayo in ay qabtan xilka u hayo gavanaha waqti xadirkan ee countiga Nairobi.
Kulankaas ayaa waxa xadiray oo kaliye labo kamid ah 6-da musharax ee u hanqal taageyso kursigaas waxana ay kala yihiin wasiirka waraabka Eugene Wamalwa iyo xildhibaanadi hore ee degan barlamaanedka Starehe Margaret Wanjiru.
← Mashruuca Beyond Zero oo lagu wado inuu dhiso isbitaal ku kacaya balaayiin shilin
Dadka Gabon oo maanta u dareeray si ay codkooda u soo dhiibtan →